हिमाल खबरपत्रिका | वाम झट्का
प्रमुख दुई वामपन्थी दलको निर्वाचन लक्षित तालमेल पार्टी एकतासम्म पुग्ने देखिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तरंगले स्वदेशी–विदेशी शत्तिहरूकोे मथिङ्गल हल्लाएको छ।
१७ असोजमा चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण सम्बन्धी ६ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बोहराटारबाट बालुवाटार फर्केर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एमालेसँगको तालमेलबारे प्रश्न गर्दा आगामी निर्वाचनका लागि तालमेल मात्रै गर्न लागेको र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि नपर्ने जवाफ पाएका थिए । त्यसपछि देउवाले मंसीरमा हुने निर्वाचनमा दाहालको जीत सुनिश्चित गरिदिने र सरकारको नेतृत्व पनि दिने प्रस्ताव गरे । तर, व्यवस्थापिका–संसद्मा तेस्रो दल भए पनि सत्ताको साँचो बोकेर हिंडेका दाहाललाई पहिलो दलका नेता देउवाको त्यो ‘पक्का अफर’ ले कुनै असर गरेन । किनकि, उनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘बम्पर अफर’ स्वीकारिसकेका थिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा छोरी रेणुलाई जिताउन सफल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भरतपुरकै अर्को निर्वाचनपछि कांग्रेससँग झ्स्केका थिए । गत ३० भदौमा भएको भरतपुरको कार्यपालिका चुनावमा एमालेले ६ र कांग्रेसले दुई सदस्य जित्यो भने माओवादीका तीनवटै उम्मेदवार पराजित भए । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि आफूहरूलाई कांग्रेसले बेवास्ता गरेको माओवादी नेताहरूको गुनासो छ । त्यही कारण १७ असोजको ६ बुँदे सहमति र घोषणा एमालेकै चाहना र प्रयासमा सम्भव भयो ।
१८ असोजमा बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणबारे छलफल गर्न कांग्रेसद्वारा बालुवाटारमा आयोजित बैठकका सहभागी ।
यद्यपि, नयाँ गठबन्धनलाई चुनावी तालमेलको रूपमा मात्रै बुझन नहुने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने बहसले अब मूर्तरूप लिन लागेको उनी बताउँछन् । ज्ञवालीका अनुसार मुुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र स्थिरतामा लैजान वाम सरकार आवश्यक भएकाले पनि तालमेल भएको हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः सबभन्दा ठूलो चुनावी झ्ट्काको रूपमा आएको यो वाम गठबन्धनको असर सबतिर परेको छ । यो झ्ट्काले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सबैको मथिङ्गल हल्लाएको देखिन्छ । यसको सबभन्दा बढी असर चाहिं सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा परेको देखिएको छ । एमालेलाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जाने अनि माओवादीसँग तालमेल गरेर बहुमत ल्याउने चाहना पूरा नहुने भएपछि कांग्रेस नेताहरू ‘नर्भस’ बन्न पुगेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । (हे. आवरण टिप्पणीः कांग्रेस के गर्छ ?)
२० असोजमा बसेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन अन्तर्गतको कार्यदल बैठक ।
एमालेले माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टीसँग तालमेलको घोषणा गरेको २४ घण्टाभित्रै १८ असोजमा कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसैअनुसार, कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र मिनेन्द्र रिजाल, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट विक्रम पाण्डे, संघीय फोरमबाट रामसहाय यादव, राजपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लोकतान्त्रिक फोरमबाट रामजनम चौधरी सदस्य रहेको कार्यदल गठन भयो । यो कार्यदल बनेको २४ घण्टा नबित्दै २० असोजमा संघीय फोरम र राजपाले संयुक्त उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरे । २ असोजको निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा संघीय फोरम दोस्रो र राजपा तेस्रो स्थानमा आएका थिए । यसले देखाउँछ, वाम तालमेलको प्रतिक्रियास्वरुप कांग्रेसले हठात् लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरेको थियो ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हिसाबले हानि हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । वाम गठबन्धनको जस्तै ६०/४० वा ७०/३० को भागबन्डामा जाँदा कांग्रेसले पाउनेभन्दा बढी गुमाउने संभावना देखिन्छ । किनकि, कांग्रेसले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सघाउनुपर्ने भनेको तराई–मधेशकै जिल्लामा हो । कांग्रेसले सबभन्दा बढी सीट जित्ने पनि तिनै जिल्लामा हो । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनले पनि कांग्रेसलाई तराई–मधेशमै बलियो देखायो । त्यस्तै, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सँगको तालमेलले झपा, बाँके र काठमाडौंमा बाहेक अन्यत्र प्रभाव नपार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
वाम तालमेलले गर्दा कांग्रेसमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभाव अझ् खतरनाक छ । धर्म, जात र क्षेत्रलाई आधार बनाएर राजनीति गर्नेहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयले कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी पार्टी बनाउने खतरा देखिन्छ । वाम एकतापछि ‘सेन्टर टू लेफ्ट’ पार्टी कांग्रेसले गरेको मोर्चाबन्दीले उसको समाजवादी चरित्रमै प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जन्मँदै सेन्टर टू लेफ्ट कांग्रेस पहिलो पटक दक्षिणपन्थी पार्टीका रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।”
आगामी निर्वाचनमा संयुक्त उम्मेदवार उठाउने सहमति गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुर ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका पनि एमाले र माओवादीबीच ६०ः४० को चर्चा चलेको थियो । त्यसबेला केन्द्रीय तहबाट सम्भव नभएपछि स्थानीयस्तरमा तालमेलको प्रयास भयो । लुम्बिनी अञ्चलका २६ सीटमा आधा–आधा उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको थियो । अहिलेको गठबन्धनको सूत्रधारमध्येका एक एमाले नेता विष्णु पौडेल र माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीको त्यो प्रयासलाई गुल्मीको विवादले विफल पारिदिएको थियो । गुल्मी–३ मा एमालेले गोकर्ण विष्ट र माओवादीले चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ लाई उठाउने अडान लिएका थिए ।
“कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदा आसन्न दुवै चुनावमा हामीले आकलन गरेको सीट जित्न गाह्रो पर्ने देखियो। त्यसैले यो बाधा हटाउनु अपरिहार्य भयो।”
तात्कालिक नाफा–घाटा हेरेर गठबन्धन गर्दा बृहत् राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्न जान्छ।
दुवै वाम पार्टी भए पनि लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइमा समानता छैन । अबका दिनमा माओवादी लोकतन्त्रतिर कति अगाडि बढ्छ, एमाले–माओवादी गठबन्धनको निरन्तरता त्यसमै निर्भर हुन्छ । बदलिएको परिस्थितिमा हिजोका सबै दुश्मनी सम्झेर बस्नु त उपयुक्त हुँदैन, तर ठूल्ठूला अपराधलाई पनि देख्यानदेख्यै गर्र्नु, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु पनि भएन । माओवादीहरू एमाले हुँदैमा हिजोका जघन्य अपराध छोपिनुहुँदैन । क्रूर हिंसा र अपराधलाई बिर्सन मिल्दैन ।
माओवादी केन्द्र सत्तामा रहँदै अर्को गठबन्धनमा जाला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दियो । हिजो एमालेलाई पनि धोका दिएको थियो । माओवादी पनि मुलुकको एउटा राजनीतिक शक्ति हो, तर उसको अस्थिर चरित्रले अविश्वास बढाएको छ । कांग्रेसले पनि त्यस्तै जवाफ दिनुहुँदैन । यो गठबन्धनले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा प्रभाव पार्छ नै । चुनावको नतिजामा प्रभाव पार्ने मनसायले गरिएको यो गठबन्धनको असर दूरगामी हुन्छ । यसअघि देश–विदेशबाट एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास भएको थियो । भारतले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहेको सार्वजनिक रुपमै भनेको थियो । यो त्यसको प्रतिक्रिया पनि हो, एमालेको तर्फबाट ।